Line Holland America na-amalite oge na njem ụgbọ mmiri na Caribbean
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Line Holland America na-amalite oge na njem ụgbọ mmiri na Caribbean
Rotterdam ọhụrụ nke Holland America Line na-apụ taa, Nov. 5, na 5 pm EST site na Fort Lauderdale, Florida, na njem ụgbọ mmiri Caribbean mbụ ya - njem njem ụbọchị ise nke na-eleta Bimini, Bahamas, ma nọrọ ụbọchị abụọ na Half Moon Cay. Ụgbọ mmiri ahụ rutere na Port Everglades Nov. 3 na-eso njem ụgbọ mmiri transatlantic nke mbụ ya si Amsterdam, Netherlands, Ọkt. 20.
Rotterdam bụ ụgbọ mmiri nke abụọ ịlaghachi na njem Florida na Caribbean maka Line Holland America kemgbe nkwụsịtụ ụlọ ọrụ malitere ọnwa 20 gara aga. N'ime Nọvemba, ụgbọ mmiri ahụ ga-esonye na Port Everglades site na Pinnacle Class nwanne-ship Nieuw Statendam na Eurodam, bụ ndị na-amalitekwa oge Caribbean ha. Nieuw Amsterdam malitere njem ụgbọ mmiri Caribbean site na Fort Lauderdale Ọkt. 23.
Ahịrị ụgbọ mmiri ahụ ji obi ụtọ nabata ndị ọbịa nọ n'ụgbọ mmiri nke Rotterdam's Caribbean, ma Antorcha nọ n'akụkụ ikele ndị njem na-abata.
Na-esote njem ụgbọ mmiri Nov. 5, Rotterdam ga-eji ụgbọ mmiri na Caribbean ruo Eprel, na njem njem niile si na Fort Lauderdale. Ụgbọ mmiri ndị a na-esi na ụbọchị isii ruo ụbọchị iri na otu na-agafe mpaghara ahụ na ebe ndịda, ọwụwa anyanwụ, ọdịda anyanwụ na ebe okpomọkụ. Ndị ọbịa na-achọ ebe mgbapụ ogologo nwere ike ịbanye na njem ndị na-anakọta - njem njem azụ na azụ jikọtara ọnụ na-enye nyocha dị omimi nke na-ekpuchi ihe karịrị otu mpaghara.
Ụgbọ mmiri Caribbean ọ bụla na-agụnye oku na Half Moon Cay, nke ndị ọbịa akara na-edepụta nọmba-otu ọdụ ụgbọ mmiri na Caribbean. Ebe nsọ a mara mma aghọọla ebe egwuregwu maka ndị na-anya ụgbọ mmiri ma nwee ọmarịcha osimiri na-acha ọcha na-acha ọcha, ụlọ okpukpu abụọ na cabanas nkeonwe, ebe iri nri dị ka Lobster Shack, ogige mmiri ụmụaka na ọtụtụ njem nlegharị anya na-atọ ụtọ maka ndị hụrụ okike n'anya, ndị njem na-akpali akpali. na ndị nchọpụta.